Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Hurricane Henry na nkuzi nkuzi na New York
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Hurricane Henri nọ na -aga New York n'isi Sọnde. Mmiri ozuzo mbụ emeworị nnukwu idei mmiri na Big Apple n'abalị Satọde. Ụzọ ụgbọ oloko ụzọ ụgbọ oloko na ụzọ kwụ otu ebe.
Ajọ Ifufe Henri malitere ịfefe n'ụtụtụ Sọnde ugwu ọwụwa anyanwụ,
Oké mmiri ozuzo ebidolarị n'ọtụtụ mpaghara, na -eme ka idei mmiri juo.
Ebe Henri na -atụ anya na ọ ga -ada na Long Island, New York ma ọ bụ ndịda New England na mgbede Sọnde ma ọ bụ n'isi ehihie ka a na -atụ anya ịgbatị ọtụtụ mpaghara.
Dị ka n'ụtụtụ Sọnde n'elekere 5.30 nke ụtụtụ EST, Henri dị ihe dị ka kilomita 120 na ndịda-ndịda ọwụwa anyanwụ nke Montauk Point, New York, na-enwe ifufe na-adịgide ruo 75 mph, National Hurricane Center (NHC) kwuru. Ọ na -aga n'ebe ugwu n'ihe dịka 18 mph.
Ịdọ aka na ntị ifufe na -arụ ọrụ maka ọtụtụ ụsọ mmiri Long Island yana akụkụ nke Connecticut na Massachusetts na Block Island.
Nchikota ịdọ aka na ntị na oke mmiri ozuzo dị maka ọtụtụ Long Island na ụsọ oké osimiri Massachusetts.
Ịdọ aka na ntị oke ifufe na -arụ ọrụ maka ... , na Block Island A Storm Surge Watch na -arụ ọrụ maka ... * East Rockaway Inlet to Mastic New York * North of Chatham Massachusetts to Sagamore Beach Massachusetts * Cape Cod Bay A Warning Hurricane dị maka ... Long Island site na Fire Island Inlet ruo Montauk Point * Oke osimiri nke Long Island site na Port Jefferson Harbor ruo Montauk Point * New Haven Connecticut ruo ọdịda anyanwụ Westport Massachusetts * Block Island Adọ aka na ntị nke oke ikuku na -adị maka ... * Port Jefferson Port ruo ọdịda anyanwụ nke New Haven Connecticut * South shore of Long Island site na ọdịda anyanwụ nke Fire Island Inlet ruo East Rockaway Inlet * Westport Massachusetts ruo Chatham Massachusetts, gụnyere Vineyard Martha na Nantucket * n'ụsọ Oké Osimiri New York na New J Eshia ọdịda anyanwụ nke East Rockaway Inlet ruo Manasquan Inlet, gụnyere ịdọ aka na ntị New Storm A Oké Ifufe pụtara na enwere ihe egwu nke iju mmiri na-eyi ndụ egwu, site na ịrị elu mmiri na-aga n'ime ime obodo site n'ụsọ osimiri. Maka ngosipụta mpaghara nọ n'ihe egwu, biko lee National Storm Surge Watch/Warning Graphic, dị na hurricanes.gov. Nke a bụ ọnọdụ na-eyi ndụ egwu. Ndị nọ na mpaghara ndị a kwesịrị ime ihe niile dị mkpa iji chekwaa ndụ na ihe onwunwe site na mmiri na -ebili na ohere maka ọnọdụ ndị ọzọ dị ize ndụ. Soro mwepụ ozugbo na ntuziaka ndị ọzọ sitere n'aka ndị ọrụ mpaghara. Ịdọ aka na ntị Hurricane pụtara na a na -atụ anya ọnọdụ ifufe n'ime ebe ịdọ aka na ntị. Ịdọ aka na ntị nke Oké Ifufe pụtara na a na -atụ anya ọnọdụ oke mmiri ozuzo ebe n'ime mpaghara ịdọ aka na ntị. Nche nche oke ifufe pụtara na enwere ike iju mmiri na-eyi ndụ egwu, site na mmiri na-ebili na-aga n'ime ime obodo site n'ụsọ osimiri. Maka ngosipụta mpaghara dị n'ihe egwu, biko lee National Storm Surge Watch/Warning Graphic, dị na hurricanes.gov. Mmasị ebe ọzọ na ndịda ọwụwa anyanwụ US kwesịrị inyocha ọganihu Henri. Maka ozi oke mmiri metụtara mpaghara gị, gụnyere elekere na ịdọ aka na ntị n'ime ime, biko lelee ngwaahịa nke ụlọ ọrụ amụma ihu igwe obodo gị nyere.